July 2014 | ပြည်သတင်း
မှတ်သားစရာ..လက်ဖျားခါလောက်တဲ့ သမိုင်းထဲက လောကီပညာ
ဗဟုသုတ, ဆောင်းပါးများ LeaveaComment
ပဲခူးတိုင်း၊ပြည်ခရိုင်၊(ကညန)ရုံးတွင်၊နာရေးကားများကို လိုင်ဆင်ပြုလုပ်ပေးနေရာမှာ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့တွေ အခက်အခဲ အချို့တွေ့နေခဲ့ရပါတယ်
ဇူလိုင်လ(၇)ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ြ့ည်ခရိုင်အတွင်းက နာရေးကူညီမှုအသင်းတွေရဲ့ နာရေးကားတွေ ကို လိုင်စဉ်လုပ်ပေးရာမှာ နေ့ ခြင်းပြီးစနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး စတေရှင်ဝက်ဂွန် မိုက္ကရိုဘတ် ပစ်ကပ် လိုက်ထရပ်စသည့် ကားမျိုးစားများသာခွင့်ပြုရန် နှစ်ဘက်အပိတ်ထားရှိရန် အလောင်းထားရှိရန် ခုနှစ်ပေရှည်သောတောင့်တင်းသောခုံထားရှိရန် စသည့်အချက်(၈)ချက်ပါရှိသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောကားများကိုသာပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုပ်ပြန်ထားတဲ့ကြေငြာချက်မှာဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အခက်အခဲတွေကတော့အများကြီးကျုံရတယ် ကျနော်တို့ကားက ၆ ပေမပြည့်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ် ဒီကားနဲ့နာရေးပို့နေတာ (၇)နှစ်ကျော်လောက်ရှိနေပြီ လိုင်စင်မရလည်းနာရေးကတော့ပို့ရမှာပဲမပို့ပဲနေလို့မှမရတာလို့ ပေါင်းတည်မြို့နယ်နာရေးကူညီမှုအသင်းဥက္ကဌက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုဝန်ကြီှးဌာနကအရေးယူမှာသတ်မှချက်နဲ့ပြည်စုံရင်လုပ်ပေးမယ် မပြည်စုံရင်ဆောင်ရွက်ပေးလို့မရဘူးညွှန်ကြားချက်ဘောင်အတွင်းပဲဆောင်ရွက်ပေးလို့ရတယ်”လို့ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ခရိုင်ဦးစီးမှုးကပြောသည်။ နာရေးကားလိုင်စဉ်လုပ်ထားပြီး လူနာတင်တာတွေလုပ်တာကလဲအစဉ်မပြေဘူး၊လူနာတင်ဖို့အတွက်ကိုလဲ သီးခြားလိုင်စဉ်လုပ်ပေးစေချင်တယ် နောက်ပြီးတချို့ နာရေးအသင်းတွေရဲ့နာမယ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အသုံးချနေသူတွေ ရှိနေလို့အခုလို ဂရက်ရိုက်တာဖြစ်တယ် လို့ ဥသျှစ်ပင် နာရေးကူညီမှုအသင်းကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါတယ်။
မှတ်ပုံတင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များအား ၀မ်းစတုတ်ဆားဗစ်စနစ်ဖြင် လိုင်စင် ပြုလုပ်ပေးရန် မှတ်ပုံတင်မဲ့ ခန့်မှန်းစာရင်းတောင်းခံရာတွင် တစ်နိုင်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ၆၉၆ စီးစာရင်းပေးပို့ခဲ့သော်လည်းဇူလိုင်လ(၁၈)ရက်နေ့အထိလိုင်စင်ပြုလုပ်သောယာဉ်မှာ၂၇၃၀စီးထိရှိနေပြီး ယခင်နာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းများယဉ်များကိုသာလုပ်ပေးရန်ဖြစ်သော်လည်းမော်ဒယ်မြင့်ကားများပါ နိဗ္ဗန်ယာဉ်နံပါတ်ရယူ၍ လမ်းများပေါ်တွင်သွာလာနေသည်ကိုတွေ့ရသောကြောင့် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်အတွက်သတ်မှတ်ထားသောယဉ်အမျိုးအစားများမှအပအခြားယဉ်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရန် ညွှန်ကြားချက်များထပ်ပြီးရောက်ရှိလာခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နိဗ္မာန်ယဉ်ကားတစီးအတွက်ကို အာမခံ(တနှစ်စာ)၁၅၀၀ ကျပ်၊စာအုပ်ဖိုး(၁၅၀)ကျပ်၊မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်သွင်းကြေး(၅၅၀)ကျပ်၊(ကညန)သွင်းရန်ငွေ(၂၂၀၀၀)ကျပ်၊အကောက်ခွံ(၅%)နဲ့ ကုန်သွယ်ခွန်(၅%) စသဖြင့် ကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး လိုင်စဉ်ကို HSE အက္ခရာနဲ့ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး ဇူလိုင်လ(၂၆)ရက်နေ့အထိ ပြည်ခရိုင်(ကညန)ရုံးတွင် လိုင်စဉ်လာဝင်ပြီးအစီးရေ(၂၃)စီးအထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
တနေ့တစ်၌ ကျွန်တော်တို့ သတင်းထောက်များ စုံမိကြရာဝယ် .....
စကားဝိုင်းလေးမှာပါရှိသူတွေက DVBသတင်းထောက် ကိုမင်းညို(ပြည်) ၊ ဒီမိုကရေစီတူဒေး သတင်းထောက် ကျော်ကျော်(ပြည်) ၊ ပြည်သတင်း(အွန်လိုင်းမီဒီယာ) မှ ပြည်သတင်းလူငယ် နှင့်
မင်းယွန်း(ခေတ္တရာ) တို့ ဆုံကြရာဝယ် စာရေးဆရာလည်းဖြစ် ကဗျာဆရာလည်းဖြစ် နယ်သတင်းထောက်လည်းဖြစ်သူ ဆရာမင်းယွန်း(ခေတ္တရာ) ကစကားဦးစလိုက်သည်.... ပြည်သတင်း မင်းကအခု မင်းရဲ့ စာဖတ်
ပရိတ်သတ်တွေကို ဗဟုသုတရစေမယ့် ပုံပြင်တွေဘာတွေတင်နေတော့ ငါလည်းမင်းကို ပုံပြင်မဟုတ်သော ပုံပြင်ပြောပြချင်တယ်ကွာ ဘယ်လိုလည်း ဟုမေးလိုက်ရာ ကျွန်တော်က ဟာဆရာကလည်း
ကောင်းတာပေါ့ ကျွန်တော် ဗဟုသုတရခဲ့ရင် ကျွန်တော့စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေလည်း ဗဟုသုတရမယ် မှန်တချပ်လိုပေါ့ဆရာရယ် ဟုပြန်ဖြေမိလိုက်စဉ်...ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက်က ပြောပြော မင်းယွန်းရေ
မင်းပြောပြီးမှ ငါလည်း ဒီကောင့်ကို ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကောင်းကောင်းလေးသေသေချာချာပြောပြအုံးမယ်...ဟုရယ်ကျဲကျဲဖြင့် လှမ်းပြောလိုက်ပြီးနောက်....ပြောသမျှညိမ်နားထောင်နေသော ဒီမိုကရေစီတူဒေး
သတင်းထောက်က ကဲပါ ကိုလေးရယ်(မင်းယွန်း..ခေတ္တရာ) ပြောမှာသာပြောပါ နားထောင်ချင်နေပြီဗျ....အေးပါကွာစကားကိုတော့ ဖြတ်မပြောကြေးနော် အရှိန်ပျက်မှာဆိုးလို့ကွာ...အိုကေ ပြည်သတင်း
မင်သေချာနားထောင် ဘက်စုံအောင်တွေးကြည့်ကွာ အခုခေတ်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းပဲ ဒီလိုကွ...........
တချိန်တုန်းက နိုင်ငံတစ်နိုငံမှာ ဘုရင်ကြီးတပါး ဆိုတာရှိတယ်
တနေ့မှာတော့ သူ့နိုင်ငံ လုံခြုံရေးအတွက် အုတ်တံတိုင်းကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်တယ်.....အုတ်တံတိုင်းကြီးတည်ဆောက်ပြီးနောက်ပိုင်း ပြီးခါနီးလေးမှာ အမှတ်မထင် အုတ်တံတိုင်းကြီးက ပြိုကျပါလေရော...
အဲခါမှာ အုတ်တံတိုင်းအောက်မှာ ဖြတ်သွားမိတဲ့ အပြစ်မဲ့ရွာသားတစ်ဦး ဟာ အုတ်တံတိုင်းပိပြိးသေသွားတယ်......သေဆုံးသွားတဲ့သတင်းက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်သွားတဲ့အခါ ဘုရင်ဆီကို ရောက်သွားတယ်..
ရောက်သွားတော့ အုတ်တံတိုင်းပိမိလို့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူသေဆုံးသွားတာကို တွေးမိပြီး အပြစ်ရှိသူကို အပြစ်ပေးရမယ်လို့ တွေးပြီးတော့ ဒီအုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်တဲ့ ကန်ထရိုက်ကို ဆင့်ခေါ်တယ် ပြီးတော့ ကြိုးမိန့်
ပေးပြီး သတ်ဖို့အလုပ်မှာ ကဲကန်ထရိုက် မင်းနောက်ဆုံးဘာများပြောချင်လည်းလို့မေးတော့ ကန်ထရိုက်က ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ စကားတစ်ခုပြောချင်ပါတယ် ...ဒီအုတ်တံတိုင်းပြိုကျတာဟာ ကျွန်တော့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး
အုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခင် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဘိလပ်မြေ မကောင်းလို့ဖြစ်ရတာပါ .....ဟုပြောသွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကဲကဲအချိန်ကျပြီ သတ်စေ....ဂျိန်းကနဲကြားလိုက်ရတဲ့အသံကြောင့် လည်ပင်ကြိုးကွင်းစွပ်ကာ သေဆုံး
သွားသော ကန်ထရိုက် ၏တစ်ဘ၀ ချူပ်ညိမ်းသွားခဲ့လေတော့သည်...။ ထို့နောက် ..ကဲ စစ်သူကြီးတွေ ခုနက ကန်ထရိုက်ပြောသလိုဆိုရင် ဒီတံတိုင်းကြီးတည်ဆောက်ရာ မှာဘိလပ်မြေရောင်းတဲ့သူကို ဖမ်းလာခဲ့ပါ...ဟုအမိန့်
ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တနေ့ တွင် ဘိလပ်မြေရောင်းသူကို ကြိုးကွင်းစွပ်လိုက်ပြီးနောက် ဘုရင်ကြီးက ကဲမင်းရဲ့ ဘ်ိလပ်မြေ ညံ့ဖျင်းမှု့ကြောင့် မြို့ အုတ်တံတိုင်းကြီးပြိုကျပြီးနောက် အပြစ်မဲ့သူတဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ် ဒီအတွက်
မင်းကို သေဒဏ်ကြိုးမိန့်ပေးမယ် နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မင်ဘာပြောချင်သေးလည်းဟု....ဘုရင်ကြီးကမေးလိုက်ရာ....ဘိလပ်မြေရောင်းသူက ....ဒီတံတိုင်းပြိုကျမှုမှာ ကျွန်တော့ ဘိလပ်မြေကြောင့်မဟုတ်ဘူး ...ဒါဟာမတရား
ခံရတာပဲ ကျွန်တော့မှာအပြစ်မရှိဘူး သဲနဲ့ကျောက်စလစ် ရောင်းသူရဲ့ သဲနဲ့ကျောက်စလစ် တွေညံ့လို့အခုလိုပြိုကျတာပါ ကျွှန်တော့မှ အပြစ်မရှိပါဘူး...ဟုပြောလိုက်ရာ ဘုရင်ကြီးက...ကဲပြောစရာလည်းပြောပြီးသွားပြီ ကဲလုပ်စ
ရာရှိတာလုပ်တော့...ဟုပြောလိုက်ရာ..ဂျိန်းဆိုသောအသံကြီး လွမ်းခြုံသွားပြီးနောက် ကြိုးကွင်းတန်းလန်းဖြင့် သေဆုံးသွားသော ဘိလပ်မြေရောင်းသူအလောင်းကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပြီးနောက်....ကဲ အာနာပါးကွက်ကြားတွေ
အဲမှားလို့ အာဏာပါးကွက်သားတွေတရားခံနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့ စကားထဲမှာ ပါတဲ့ သဲနဲ့ကျောက်စလစ် ရောင်းသူဆီကိုလိုက်ပြီးဖမ်းလာခဲ့ပါ သူ့ကိုလည်း အပြစ်ပေးရမယ်..ဟုပြောလိုက်ပြိးနောက်တနေ့မှာတော့ တံတိုင်းကြီးဆောက်
လုပ်ရာ တွင်အသုံးပြုခဲ့သည့် သဲနှင့်ကျောက်စလစ် ရောင်းသူအား ကြိုးစင်တင်ပြီး ထုံးစံအတိုင်း ဘုရင်ကနောက်ဆုံးစကားဘာပြောချင်လည်းမေးရာ ....သဲနှင့်ကျောက်စလစ်ရောင်းသူက ...ဒီမယ်ဘုရင်ကြီး ခင်ဗျားတခုခုမှားနေပြီဗျာ
သေချာစဉ်းစားပါအုံး ဒီအုတ်တံတိုင်းကြီးပြိုကျတာ ကျွန်တော်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး ဆိုင်တာက ဒီအုတ်တံတိုင်းကြီးဆောက်လုပ်ကာစက အစအဆုံးသုံးစွဲခဲ့တဲ့ မြစ်ရေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ မြစ်ရေခပ်ရောင်းသူရဲ့ အပြစ်ပါ..ဟုပြောလိုက်ချိန်...
လာရောက်ကြည့်ရှု့သူလူအုပ်ထဲမှ ...ဟိုက် သွားပြီး သူပြီးငါ့အလှည့်ပဲ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလည်းလောလောဆယ်အချိန်ရှိတုန်းလစ်မှ....ဟုဆိုကာ လူအုပ်ထဲမှ မြစ်ရေခပ်ရောင်းခဲ့သူက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့လေတယ်..တပြိုင်တည်း
မှာပဲ ကဲကဲအချိန်မရှိတော့ဘူး ပြောချင်တာလည်းပြောပြီးပြီ မင်းတို့ဘယ်လောက်ဘာတွေပြောပြော ငါကဘုရင်ကွ ငါလုပ်စရာရှိတာပဲငါလုပ်မယ် ကဲကြာတယ် သတ်စေကွာ.......ဂျိန်း .....
ဒီအချိန်မှာ တမှိုင်မှိုင်တထွေထွေ ဖြစ်နေတဲ့ မြစ်ရေခပ်ပြီးရောင်းစားခဲ့သူမှာတော့ ဟိုပြေးရမလို ဒီပြေးရမလို လုပ်နေတုန်း မောပန်းစွာ ဇရပ်တခုတွင်နားနေလိုက်ချိန်...အနီးသို့ အထုပ်အပိုးများဖြင့် အဘိုးအိုတဦးရောက်ရှိလာပြီး ..
ဟဲ့လူကလေး မင်းကြည့်ရတာစိတ်မရွှင်ပေဘူးကွာ ဘာတွေများဖြစ်နေလည်းကွယ့်...အဘိုးအိုကမေးလိုက်ရာ....ကျွန်တော့ ခြေထောက်တွေပြေးနိုင်သမျှတော့ပြေးနေရတယ်အဘိုးရယ် ဒီလိုပါ...ဟုဆိုကာ အုတ်တံတိုင်းပြိုကျခဲ့
သည့် ပြဿနာများအား သေသေချာချာရှင်းပြခဲ့ပြီးနောက်....အော်ဂလိုးကိုး....မင်းတို့ဘုရင်ကဦးနှောက်မရှိလိုက်တာကွယ်...ကဲပါထားပါတော့ ဒီလိုလုပ်ကွာ ...မနက်ဖြန်..ရဲမက်တွေနဲ့ တွေ့ရအောင်လုပ် ပြီးရင် မင်းဝန်ခံလိုက်ကွာသူတို့ဖမ်းပြီးကြိုးစင်
တင်တာနဲ့ ငါမင်းအနားကိုလာခဲ့မယ် ပြီးမှ ကြည့်လုပ်ကြတာပေါ့....ဟာအဘိုးရယ်ဖြစ်ပါ့မလား ဘုရင်က ဦးနောက်မရှိဘူးလေ သူ့ကအရူးတယောကါလိုပါပဲ ကျွန်တော့ပဲသတ်မှာပေါ့..ကဲပါလူကလေးရယ် မင်းမသေစေရဘူး အဘိုးပြောသလိုသာ
လုပ်ပါ ဟုဆိုကာ...အဘိုးအိုနှင့် လမ်းခွဲပြီး မြစ်ရေခပ်ရောင်းသူ မိမိနေအိမ်သို့ ပြန်အလာ နေအိမ်ရှေ့မှာ အသင့်စောင့်နေသော ရဲမတ်များမှ မြစ်ရေခပ်ရောင်းသူကို ဖမ်းခေါ်သွားခဲ့လေတော့သည်.....
မနက်မိုးသောက်ချိန်တွင် ကောင်းကင်ကအုံ့ဆိုင်းဆိုင်း မိုးတွေမှိုင်းနေချိန်မှာ စိတ်ဝင်တစား တစ်တိုင်ပြည်လုံးရဲ့ မျက်လုံးတွေက လူအုပ်ထဲတွင် ထီးထီးကြီးတည်ရှိနေသော ကြိုးစင်ကြီးဆီသို့ မျက်လုံးများဦးတည်လျှက်ရှိနေသည်။.....
ထိုစဉ် ဘုရင်ကြီးဆီမှ စကားသံထွက်လာတော့၏...ကဲ မြစ်ရေခပ်ရောင်းသူ မင်းကြောင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်မင်းကို ကြိုးမိန့်ပေးမယ် နောက်ဆုံးမင်းဘာပြောချင်လဲ...ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်
ဒီပရိတ်သတ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော့အဘိုးရှိပါတယ် သူနဲ့ ခဏလောက်တွေ့ဆုံချင်ပါတယ်...အေးကောင်းပြီခေါ်လိုက်....အဘ်ိုးရေးးးအဘိုးးးးးအေးအေးငါ့မြေး အဘိုးလာပါပြီကွယ် ဟုဆိုကာ အဘိုးအိုကြိုးစင်ပေါ်သို့တက်လာပြိးနောက်...
မြစ်ရေခပ်ရောင်းသူနားသို့ခပ်တိုးတိုးစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်သည်..ထိုအချိန်တွင် မြစ်ရေခပ်ရောင်းသူနဲ့ အဘိုအိုတို့နှစ်ဦး ကြိုးကွင်းအား သူလုလိုက် ငါလုလိုက်အသည်းအသန်ဖြစ်နေတာကို ထူးဆန်းစွာမြင်လိုက်ရသော ဘုရင်က..
ဟဲ့ဟဲ့...ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလည်း..မြန်မြန်ဖြေစမ်း...ထိုအချိန်ဝယ် မြစ်ရေခပ်ရောင်းသူနှင့် အဘိုးအိုတို့က ပြိုင်တူပြန်ဖြေလိုက်သည်။....အခုကောင်းကင်မှာ ပန်းရထားစိုက်နေပါပြီ အခုအရင်သေတဲ့သူကို နတ်ပြည်သို့ပန်းရထားဖြင့်
ခေါ်ဆောင်သွားမယ်လိုပြောနေပါတယ်...ဟုပြန်ဖြေလိုက်ရာ....ဘုရင်ကြီးက ဟေဟုတ်လားဟ...ကဲကဲနေနေ မင်းတို့တွေ သွားလိုရာသွားနိုင်ပြီ ....ကဲငါပဲနတ်ပြည်လိုက်သွားမယ် ပန်းရထားစီးပြီးတော့ဟုပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်...
အဘိုးအို နှင့် မြစ်ရေခပ်ရောင်းသူ နှစ်ဦးထံမှ ကြိုးကွင်းအားအတင်းလူယူကာ သူ့ကိုယ်သူ ကြိုးစွဲချသွားလေးတော့သည်..........တိတ်စိတ်စွာ နားထောင်နြေ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ သတင်းထောက်တွေ ခဏတာ ငြိမ်သတ်ပြီးမှ အဖြေကို
စဉ်းစားမိတယ် သူကဒါမျိုးမြင်တယ် ကိုယ်ကဒါမျိုးမြင်တယ်ပေါ့ အဲချိန်မှာ ကိုမင်ယွန်း(ခေတ္တရာ)က မတူညီစွာ အမြင်တွေရှိနိုင်တယ် စာဖတ်သူတွေ စိတ်ြို့က်တွေးလိမ့်မယ် ပြည်သတင်း မင်းသိတာတော့ သိတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မင်းသိတာထက်
ပိုသိတဲ့သူတွေ ပြည်မှာအများကြီးရှိနေနိုင်တယ် အဲဒိတော့ ဒီရသ စာလေးကို မင်းရဲ့ ပြည်သတင်းဖတ် ပရိတ်သတ်တွေ လွတ်လပ်စွာတွေးတောနိုင်အောင် ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ပုံပြင်တခုကိုပြောပြလိုက်ပါ..ဟုဆိုကာ မောသွားဟန်ဖြင့် အနီးရှိ ရေခဲရေဗူး
ထဲမှ ရေခဲရေများကို မော့သောက်လိုက်ပြီးနောက်...ဒီဗွီဘီ သတင်းထောက်က ကဲ ပြည်သတင်းငါလည်းမင်းကိုပုံပြင်ပြောပြမယ် မကြာပါဘူးကွာ အခုငါတို့တွေ လက်ဖက်ရည်သွားသောက်မယ် မင်းကျသင့်ငွေရှင်းရမယ် ကဲဘယ်လိုလည်း
ပြည်သတင်း....ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ...ရပါတယ် ကဲချီတက်ကြမယ်လက်ဖက်ရည်သို့ပေါ့ဆ၇ာသမားတို့ရယ်ဟု ဆိုကာ...ရယ်မောခြင်းအတွေးများဖြင့် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့သွားခဲ့ပါတော့သည်။.....
အခုလက်ရျိနိုငိငံတော်မျာ အုပ်ချုပ် နေတဲ့ မဟာ ပညာရှင်များရဲ့ စကားတွေကို မကြားချင်သော်လည်း ကြားနေရတော့ ဆရာအောင်သင်း ရေးပြခဲ့ဘူးတဲ့ ပုံပြင်လေးကို အမှတ်ရသဗျာ။အဲဒါကြောင့် မျှဝေ လိုက်ပါသဗျာ။အဆုံးလေးက စစ်အစိုးရ ပြောတာလေးနဲ့ တူသမို့ ပိုသဘောကျသဗျ။နောက်တခါ ပုံပြင်တွေမှာ နှပ်ကြောင်း လုံးဝ မပေးတော့ပါ။စာဖတ်သူများ လွတ်လပ်စွာခံစားနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ တရုတ်အဖိုးအိုတစ်ယောက် နေထိုင်တယ်။မြန်မာတွေ နိုင်ငံခြားသားတွေကို အထင်ကြီးတဲ့ ဓလေ့အတိုင်း သူ့ကို ပညာရှိအဖြစ် မှတ်ယူလေသတဲ့။(ယခုအစိုးရများ နည်းတူ)
အဲဒီတော့ ဖျားနာရင်လည်း အဲဒီ တရုတ်ပညာရှိကြီးထံပြေးသတဲ့။ လင်မယားအဆင်မပြေရင်လည်း အဲဒီပညာရှိကြီးထံပြေးတာပဲ။ (ပြည်သတင်းသို့လမ်းညွှန်ချက်)
အဲဒီရွာက လူတစ်ယောက်ရဲ့နွားတစ်ကောင်ဟာ စဉ့်အိုးတစ်လုံးထဲကို ရေ ငုံ့ပြီး ၀င်သောက်ယင်း နွားရဲ့ခေါင်းက ပြန်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့။
အဲဒါနဲ့ ရွာသားတွေက ပညာရှိကြီထံပြေးတာပေါ့။ ဟိုရောက်တော့.....
ကျွန်တော့်ရဲ့နွားလေး စဉ့်အိုးထဲ ခေါင်းစွပ်နေပြီ။အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ် ရမလည်းဆိုတာ အကြံပေးပါဦး။ လို့ပြောတဲ့အခါ...
ငါပြောမယ် အသေအချာနားထောင် မင်း ဒီကပြန်သွားပြီး စဉ့်အိုးကိုခွဲလိုက် လို့ ပြောတာနဲ့ ရွာသားကလည်း ချက်ချင်းပြေးပြီး နွားခေါင်းမှာ စွပ် နေတဲ့ စဉ့်အိုးကိုခွဲလိုက်တယ်တဲ့။
ဒါပေမယ့် စဥ့်အိုးသာကွဲသွားပြီး စဉ့်အိုးကရွတ်ကတော့ နွားရဲ့ လည်ပင်းမှာ စွပ်ရက်တန်းလန်း ကျန်နေခဲ့သတဲ့။
အဲဒါနဲ့ ရွာသားတွေက တရုတ်ပညာရှိထံပြေးပြန်သတဲ့...။
ပညာရှိကြီး..။စဉ့်အိုးက ကွဲသွားပေမယ့် ကရွတ်ကြီးက လည်ပင်းမှာတန်းလန်းကြီး။ လို့ ပြောတဲ့အခါကျတော့ ပညာရှိက ..
ရွာသားလည်း တစ်ချိုးထဲ ရွာပြန်ပြီး
အဲဒီတော့ စဉ့်အိုးလည်းကွဲ နွားလည်းသေပြီ။
ဒါပေမယ့် ရွာသားတွေက တရုတ်ကြီးကို အပြစ်မမြင်ပဲ ဒီတရုတ်ကြီးကိုပဲ မဟာကျေးဇူးရှင် လို့ မြင်နေကြတယ်။
အမဲသားဟင်းတစ်ခွက်ကို ဦးဦးဖျားဖျား တရုတ်ပညာရှိထံ
ရွာသားတွေလည်း သူတို့ ဘာအမှား လုပ်မိသလည်း ဆိုပြီး ထိတ်ထိတ်ပြာပြာနဲ့..
ကျွန်တော်မျိုးတို့ ဘာများ အမှား
ပညာရှိကြီးက...အင်း...မင်းတို့တွေ ငါမရှိရင် ခက်ဦးမယ်။ လို့ ပြောသတဲ့။
မင်းတို့တွေ တိုင်ုးပြည် ချောက်ထဲကျဘို့ လက်နှစ်လုံး အလိုမှာ ငါမရှိရင်ခက်ဦးမယ်။
via : http://www.dmoethar.com/2013/08/blog-post_22.html#more
လူမပြောင်း မူမပြောင်း ရှေ.သို.ချီမည်.လမ်းကြောင်း သရ၀ဏ်(ပြည်)
လူမပြောင်း မူမပြောင်း ရှေ.သို.ချီမည်.လမ်းကြောင်း
ကျွန်တော်တို.မြို.တွင် ဘော်လီဘောအသင်းတစ်သင်းရှိသည် ။ အသင်းခေါင်းဆောင်မှာကိုမှုန်ကြီးဖြစ်သည် ။ ကိုမှုန်ကြီးဘော်လီဘော အသင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပုံမှာ ပြည်နယ်နှင်.တိုင်းပြိုင်ပွဲ များသို.သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင်တိုင်းအသင်းအတွက် ခရီးစားရိတ် ၊တည်းခိုခ ၊ ကုန်ကျစားရိတ်အ၀၀ကို စိုက်ထုတ်လေသဖြင်. ဘောလီဘောအရည်အချင်း ဘာမှဟုတ်ဟုတ်ငြားငြားမရှိသော်လည်း အသပြာတန်ခိုးကြောင်. ခေါင်းဆောင်တက်ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည် ။ သူတို.အသင်းသည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပဲခူးသို.သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်သော်လည်း တစ်ခါမှ နိုင်ပွဲမရ ပဲအမြဲတမ်းလိုလို ရှုံးနိမ်.ပြီးသာအရှက်တကွဲပြန်လာရစမြဲဖြစ်သည် ။ ဒီနှစ်ရှုံးသဖြင်.နောက်နှစ်မပြိုင်တော.ဘူးဟုမြို.သူမြို.သားများကထင်သော်လည်း အချိန်တန်သောအခါ ကိုမှုန်ကြီးတို.ဘော်လီဘောအသင်းမှာ ရှေ.သို.ထွက်လာစမြဲဖြစ်သည် ။ ကိုမှုန်ကြီးသည် အသင်းအတွက်လူရွေးတိုင်း အခြားသူများကိုအလှည်.ကျရွေးလေ.ရှိသော်လည်း အသင်းခေါင်းဆောင်နေရာကိုမူ သူမှတပါးမည်သူ.ကိုမျှလွှဲအပ်ခြင်းမပြုပေ ။ လူရွေးသူမှာလည်းသူပဲဖြစ်သဖြင်. သူ.စိတ်ကြိုက်ကစားသမားများ ၊ သူနှင်. ပလဲနံပသင်.သူများ ၊ သူ.ကိုဖားနိုင်သူများသာပြိုင်ပွဲသို.ခေါ် သွားလေ.ရှိသည် ။ ပြိုင်ပွဲနီးလာတိုင်းကိုမှုန်ကြီးသည်လူရွေးချယ်ရေးနှင်.ပါတ်သက်၍ ဤကဲ.သို.ပြောဆိုလေ.ရှိသည် ။
“ ငါတို. အသင်းအမြဲတမ်းရှုံးနေတာ ရပ်တန်.ဖို. ဒီနှစ်တော.လူရွေးတဲ.နေရာမှာ သေသေချာချာဂရုစိုက်ပြီး ရွေးမှဖြစ်တော.မယ်ဟေ. ၊ အဲဒိတော.ကွာ ငါရယ် …. ကြည်မြင်.ရယ် ၊စိုးအောင်ရယ် ..မောင်တိုးရယ် …”
ထိုနှစ်ကမအောင်မြင်သောအခါ နောက်တစ်နှစ်တွင် ကိုမှုန်ကြီးသည်ဤသို.ပြောပြန်သည်
“ ဒီနှစ်တော. လူကောင်းတွေပဲရွေးမှဖြစ်တော.မယ် ၊ပြိုင်ဘက်တွေက လွယ်တာမဟုတ်ဘူး ၊ အဲဒီတော.ကွာ ငါရယ် … ၊ ဇော်ကြီးရယ် ၊ ဂျာဂျားရယ် ၊ အောင်မြင်.ရယ် ၊အောင်ဆန်းမင်းရယ် …..”
နောက်တစ်နှစ်လည်းမအောင်မြင် ။ထိုအခါ လူရွေးပြန်သည် ။ထုံးစံအတိုင်း ငါရယ် ဟုအစချီသည် ။ သူဤသို.လူရွေးသည်ကိုမည်သူမျှမအံ.သြ ။ အောင်မြင်မှာလည်းမဟုတ် သည်ကို အားလုံးကသိနေသည် ။ မြို.မှာတော. အသင်းအဖွဲ.တွေ မှာလူရွေးကြလျင် ကိုမှုန်ကြီး၏လက်သုံးစကားဖြစ်သော ”အဲဒိတော.ငါရယ်“ဟူသောစကားကိုရယ်ပွဲဖွဲ.ကြသည် ။ အချို.ကလည်း ငါရယ်ဟု ပါးစပ်ကထုတ်မပြောသော်လည်း ကိုမှုန်ကြီး၏ပေါ်လစီကိုလက်တွေ.လိုက်နာကျင်.သုံးကြသည် ။ ဒီနှစ်ငါဥက္ကဌ ၊ နောက်နှစ်လဲ ငါပဲဥက္ကဌ ၊ နောက်လာမည်.ကာလများအတွက်မူ ငါ.ကိုပင် ငါက ရည်မှန်းထားသည် ။
ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ကိုမှုန်ကြီး လုပ်ပေါက်မျိုးကခေတ်စားနေသည် ။ ၁၉၆၂ ခု မတ်လတွင် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းခေါင်းဆောင်သော တော်လှန်ရေးကောင်စီဟု တက်ကြွစရာနာမည်ပေးထားသည် စစ်အစိုးရတက်လာသည် ။ အရင်းရှင်စနစ် ဘာစနစ်ညာစနစ်ကို ငြီးငွေ.စိတ်ပျက်နေသော ပြည်သူလူထုကို မျက်လှည်.ပြပုံမှားရိုက်သည်.အနေဖြင်. မြန်မာ.ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဟူသော နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဖြင်. စကားလုံးအကြီးကြီးသုံးကာ ဆွဲဆောင်ခဲ.သည် ။ လူနှင်.ရုပ်ပါတ်ဝန်းကျင်၏အညမညသဘောတရား ဘာညာဖြင်. စကားကြီးစကားကျယ်တွေသုံးကာ ၀ါဒမှိုင်းတိုက်ခဲ.သည် ။ တကယ်တော. ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းသည် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုရော ၊ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုရော ယုံကြည်သူမဟုတ် ။ အာဏာသည် သေနတ်ပြောင်းဝမှလာသည်(Political power grows out of the barrel ofagun.) ဟူသော မော်စီတုန်း၏ အာဏာရှင်ဝါဒကိုသာယုံကြည်သူဖြစ်သည် ။ ထိုယုံကြည်ချက်ဖြင်. တိုင်းပြည်ကို စစ်ဘိနပ်အောက်သို.သွင်းကာ ၁၉၆၂ မှ ၁၉၈၈ အထိ ၂၆ နှစ်လုံးလုံးအုပ်ချုပ်ခဲ.ပါသည် ။ ထို ၂၆ နှစ်တာကာလအတွင်းတရုတ်ကုလားကိုအပြုတ်တိုက်မည်. အမျိုးသားရေးဝါဒီ လိုလို ၊ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဖြင်. လောကနိဗ္ဖာန်ဘုံသို.ချီတက်တော.မလို ၊ တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျရန်လက်နှစ်လုံးပဲလိုတော.သဖြင်.ကယ်တင်ခဲ.သလိုလို ဖြင်. စစ်အာဏာရှင်ဝါဒကိုသာထူထောင်ခဲ.ပါသည် ။ ဦးနေ၀င်းဘုန်းမီးနေလတောက်ပခဲ.စဉ်အတွင်း နိုင်ငံပိုင်ကျောက်မျက်ရတနာများရောင်းချခြင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုရောင်းဝယ်သည်.ပုံစံဖြစ်နေပါသည် ။ ကမ္ဘာ.ဘဏ်တွင်မြန်မာငွေများခိုင်မာစေရန်ရွှေချောင်းများအာမခံတင်ထားသည်ကို အရင်းရှင်ကို အားမပေးဟုဆိုကာ ပြန်လည်ထုတ်ယူခဲ.ပါသည် ။ ထိုရွှေချောင်းများဘယ်နေရာရောက်သွားသလဲ ယခုအထိတိကျသောအဖြေမပေါ်တော.ပေ ။ ဆွဇ်ဇာလန်ဘဏ်တွင်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းဖွင်.လှစ်ထားသည်ဟုလည်းပြောကြပါသည် ။တချိန်ကချမ်းသာခဲ.သော မြန်မာနိုင်ငံကတော. တဖြည်းဖြည်း ဆင်းရဲမွဲတေလာကာ ကမ္ဘာ.ဖွံ.ဖြိုးမှုအနိမ်.ဆုံး ( LDC ) နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံလိုက်ရပါတော.သည် ။ကြာကြာဝါးမှခါးမှန်းသိသော ပြည်သူများက တတိုင်းတပြည်လုံး ၁၉၈၈ တွင် တော်လှန်ခဲ.ကြရာ ဦးနေ၀င်းနှင်.တကွ ၆၂ အာဏာရှင်စနစ်နိဂုံးချုပ်ခဲ.ပါသည် ။
ထို.နောက် ၁၈.၉.၁၉၈၈ တွင် လူသစ်တက်လာပါသည် ။ ထိုလူသစ်မှာကျွန်တော်တို.ပြည်သူများမျှော်လင်.ခဲ.သောလူသစ်တော.မဟုတ် ။ အစိမ်းရောင်ယူနီဖောင်းဝတ်ထားသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည် ။ နောက်တက်တဲ.မောင်ပုလဲ ဒိုင်းဝန်ထက်ကဲ ၊ ပထမဘုန်းကြီးကခေါင်းတစ်ချက်ခေါက်ပြီး နောက်ဘုန်းကြီးကနှစ်ချက်ခေါက်သည်ဟုဆိုရမလို နောက်တက်လာသူသည်လည်းစစ်အာဏာရှင်ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းထက်ကဲကာ သူ.ကိုယ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်ဟု အမည်သညာခေါ်တွင်စေခဲ.သည် ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်သည် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုလွတ်လပ်၍တရားမျှတစွာကျင်းပပေးပြီး ရွေးကောက်ပွဲပြီးလျှင် တပ်မတော်သည် စစ်တပ်းလျားသို.ပြန်မည် ၊ အခြေခံဥပဒေကို ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီကရေးဆွဲရမည် ၊ တပ်မတော်သည် အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင်.သမိုင်းတရားခံအဖြစ်မခံနိုင်ဟု ပြတ်သားရဲဝံ.စွာကြေငြာခဲ.သည် ။ ထိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သည်လည်း သူ၏မှတ်ချက်စကားကိုလက်မခံနိုင်သူ တစ်စု၏လက်ချက်ဖြင်.အငြိမ်းစားယူရကာ နောက်ထပ် စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးတစ်ယောက် တက်လာခဲ.ပြန်၏ ။ ထိုမှတစ်ဖန် ကျောင်းသား ၊ ပြည်သူ ၊ ရဟန်းရှင်လူ များ အစဉ်တစိုက် အုံကြွတောင်းဆိုမှုများကြောင်. မပြောင်းလျင်မဖြစ်တော.သောကြောင်. ၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေကို နာဂစ်မုန်တိုင်းကြားမှ ဇွတ်အတည်ပြုကာ ဒီမိုကရေစီယောင်ယောင် စစ်အစိုးရယောင်ယောင်ခေတ်သို.ရောက်လာပေ၏ ။ တကယ်တမ်းသုံးသပ်ကြည်.သောအခါ သမ္မတသည်လည်း စစ်တပ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်သည် ။ ပြည်သူ.လွှတ်တော်ဥက္ကဌမှာလည်းစစ်တပ်မှ ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်သည် ။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌမှာလည်း စစ်တပ်မှထွက်လာသူဖြစ်သည် ။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည်လည်းအရပ်သားမဟုတ် ၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးသည်လည်းအရပ်သားမဟုတ် ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင်.ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တို.ထက်အဆင်.မြင်.သောတပ်မတော်မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဖြစ်နေသည် ။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မ၇ှင်ဥက္ကမှာလည်းတပ်မှထွက်လာသောဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေသည် ။ လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း စစ်သားတွေရှိနေသည် ။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ.ထဲမှာလည်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေပါနေသည် ။ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ.ထဲတွင်လည်းစစ်သားများပါနေသည် ။ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ၊တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာလည်းတပ်မတော်သားများပါသည် ။
ယခင်ကစစ်အစိုးရသည် ယခုအခါတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီဟုပြောသည်.တိုင် စစ်အစိုးရဟုသာပြောရမလိုဖြစ်နေသည် ။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစကာတိုင်းပြည်ကိုတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်လာခဲ.သော စစ်တပ်မျိုးဆက်သည် ယနေ.အချိန်အထိ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေဆဲပင်ရှိသေးသည် ။ ပြည်သူလူထုသည် ထိုအခြေအနေကိုငြီးငွေ.နေပါပြီ ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်သက်ဆိုးရှည်စေမည်.မည်သည်.ပုံစံကိုမျှပြည်သူလူထုကမလိုလားတော.ပါ ။ ထိုအချက်ကို ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်တစ်ချက် ၊၂၀၀ရ သံဃာအရေးအခင်း (ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး)တွင်တစ်ချက် ၊ ၂၀၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်တစ်ချက် ၊ ၂၀၁၄ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုတွင်တစ်ချက် ပါဝင်ပြသခဲ.ပြီးဖြစ်ပါသည် ။ ထပ်မံ၍ ရှင်းအောင်ပြောပါရစေ ။ မြန်မာပြည်သူလူထုအများစုသည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအလိုမရှိပါ ။ စစ်အာဏာရှင်တို.၏အဆွယ်အပွား ပါတီများကို မနှစ်သက်ပါ ။စစ်တပ်နှင်.စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းသည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစကာ ယနေ.အချိန်အထိ အာဏာကိုလက်မလွတ်စတမ်းနည်းအမျိုးမျိုးနှင်.ချုပ်ကိုင်လာခဲ.သည်ဖြစ်ရာ တိုင်းပြည်သည် တိုးတက်သလား မတိုးတက်ဘူးလား ၊ ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဆိုတာ ဝေးဝေးသွားမကြည်.ပါနှင်. ဈေးထဲမှာပင်အိမ်ရှင်မများကိုမေးကြည်.လျှင်အဖြေသိနိုင်ပါသည် ။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေ ၊ လုပ်အားခ ၊ ပညာသင်ကြားနိုင်မှု ၊ နိုင်ငံ၏ ဥစ္စာဓန ၊ အခြေခံအဆောက်အဦ ၊ တို.ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည်.လျှင်သိနိုင်ပါသည် ။ တိုင်းပြည်ကိုအရပ်သားပညာတတ်အစိုးရကအုပ်ချုပ်ပါမှ ကမ္ဘာ.အလည်တွင် ရင်ဘောင်တန်းကာ တိုးတက်မှုအသီးအပွင်.များမြင်ရပေမည် ။ သေနတ်ကိုင်ထားသောလူများအုပ်ချုပ်သည်ထက် Lap Top ကိုင်ထားသော ကွန်ပျူတာကိုင်ထားသော အရပ်သားပညာရှင်များအုပ်ချုပ်တာက တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို.ရောက်နိုင်ကြောင်း လီကွမ်ယုနှင်. ပညာတတ်အရပ်သားများအုပ်ချုပ်ခဲ.သော စင်္ကာပူက သက်သေပြနေပါသည် ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများသည် တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်ဝပ်ပိပြားအောင် တော.လုပ်နိုင်ပါလိမ်.မည် ၊ သို.သော် တိုးတက်ချမ်းသာအောင်တော.မလုပ်နိုင်ကြောင်း မြန်မာ ၊မြောက်ကိုရီးယား ၊ အီရတ် ၊ကျူးဘား၊လစ်ဗျား၊နိုင်ဂျီးရီးယားတို.က သက်သေပြနေပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်လာသောတပ်မတော်မျိုးဆက်တစ်ခုသည် စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းဖြင်. ဒီမိုကရေစီ သဘောကိုလည်းလက်ခံသည်.အနေနှင်. ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်သော အရပ်သားအစိုးရ တစ်ရပ်ကို ၂၀၁၅ တွင်ရွေးချယ်ခွင်.ပေးတော.မလားဟု တိုင်းသူပြည်သားများက မဲပေးရန်အားခဲနေကြပါသည် ။ လက်ရှိ တပ်မတော်ခေါင်းဆောင် (ဟောင်း) ၊ လက်ရှိတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်(သစ်)တို.သည် ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်မည်.အရပ်သားခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ကို လက်သင်.ခံခြင်းဖြင်. မြန်မာနိုင်ငံ၏အလှည်.အပြောင်းကို လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပုံဖော်ခွင်.ပေးကြစေချင်ပါသည် ။သို.သော် ၁၉၆၂ အာဏာရှင်မျိုးဆက်သည် ၅၂ နှစ်ကြာခဲ.ပြီဖြစ်သော်လည်း အပြောင်းအလဲကိုမလိုလားသေးမှန်း စိတ်မကောင်းစွာတွေ.နေရပါသည် ။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၏ အောင်မြင်နိုင်စွမ်းကို တစိမ်.စိမ်.တွေးကြောက်လာသော အာဏာရပါတီ နှင်.ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များသည်ယခုထက်တိုင်တရားမရနိုင်သေးပဲ အာဏာကိုဆက်ကိုင်ထားရန်ခြေလှမ်းပြင်လာသည်ကိုစိတ်မကောင်းစွာတွေ.နေရပါသည် ။ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနှင်.ပါတ်သက်သောအဆို ၊ အနိမ်.ဆုံးလုပ်ခလစာသတ်မှတ်ရေးအဆို ၊တပ်မတော်မှသိမ်းထာသောလယ်ယာမြေများပြန်လည်ပေးအပ်ရေးအဆို ၊လွှတ်တော်အမတ်များကိုတာဝန်မှပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သောဥပဒေပြဌာန်းရေးအဆို ၊ အစိုးရနှင်.လွှတ်တော်အမတ်များ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဥစ္စာဓနများဖော်ထုတ်ကြေငြာရေးအဆို၊ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖွဲ.စည်းရေးအဆိုများနှင်.ပါတ်သက်လျင် နှေးကွေးလေးလံစွာဆောင်ရွက်လေ.ရှိသော လွှတ်တော်ကြီးသည် ၂၀၀၈ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းအခန်းကဏ္ဍတွင်မပါဝင်သော အချိုးကျကိုယ်စားပြုစနစ် ( PR စနစ် ) ဖြင်.ပြောင်းလဲကျင်.သုံးရေးအဆို တင်သွင်းရာတွင်မူ သူမတူအောင်ဂျက်လေယာဉ်နှုန်းဖြင်. ရှေ.သို.ချီတက်နေတာတွေ.ရပေသည် ။ ထိုမြှုပ်ကွက်၏ နောက်ကွယ်တွင် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် N.L.D ပါတီ မဲအများစုရကာ အစိုးရဖွဲ.ဖြစ်သွားမည်ကိုတားဆီးလိုသော ဆန္ဒကအဓိကနေရာမှပါနေကြောင်း ထမင်းစားသူမှန်သမျှစဉ်းစား၍ရနေကြပေသည် ။
အာဏာရှိသူများသာ ရိုးသားခဲ.ကြပါက ထိုအချိုးကျကိုယ်စားပြုဟူသောစနစ်ကို ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြိုတင်မဲအများစုဖြင်. ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီမှမဲဆန္ဒနယ်အတော်များမျာတွင်နိုင်ခဲ.စဉ်က ကျင်.သုံးဖို.အဘယ်.ကြောင်.တစ်ခွန်းမှမဟပဲ ယခုမှကယောင်ကတန်းဖြင်. ဖုတ်ပူမီးတိုက်ပွဲထုတ်လာသနည်း ။
ရှုံးတော.မည်မှန်းသိ၍ ကစားပွဲတွင် စည်းမျဉ်းကိုပြင်ခြင်းလော ။ စာမေးပွဲတွင် အမှတ် ၄၀ ရမှာမသေချာတော.သောအခါမှ အောင်မှတ်မှာ ၁၀ မှတ်ရလဲအောင်သည်ဟုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခိုင်းခြင်းကား ကိုယ်.အရည်အချင်းကိုကိုယ်ဖော်ပြရာရောက်နေပေ၏ ။ အမှန်စင်စစ် ကိုယ်.တုန်းက ရဲရဲကြီးအလှည်.ယူခဲ.သလို အရပ်သားများအာဏာရလာမှာကိုလည်း ရဲရဲကြီး အလှည်.ပေးသင်.ပါသည် ။ စစ်တပ်ကိုယုံလျင် လူတွေကစစ်တပ်ကိုမဲပေးမည် ၊ ကြံခိုင်ရေးပါတီကိုယံလျင် လူတွေကကြံခိုင်ရေးကိုမဲပေးမည် ၊ N.L.D ကိုယုံလျင် N.L.D ကိုမဲပေးမည် ၊ ရခိုင်ပါတီကိုယုံလျင်ရခိုင်ပါတီကိုမဲပေးမည် ၊ ရှမ်းအမျိုးသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်ကိုယုံလျင် ရှမ်းကိုမဲပေးမည် ။ သူ.မဲဆန္ဒနယ်မြေတွင် သူ.ကိုယ်စားလှယ် ကို သူ.ပြည်သူတွေကရွေးချယ်ခြင်းစနစ်ဟောင်းသည် ဘာမှအပြစ်ဆိုဖွယ်ရာကြီးကြီးမားမားးမရှိ ၊ လူကြိုက်နည်း၍ရှုံးရသူတစ်ယောက်ပြုတ်ကျန်နေခြင်းသည် ဘာမှ ၀မ်းနည်းနေစရာမလို ။ PR စနစ်အရဆိုလျင် အမတ်လောင်း ကိုရွေးကောက်ခွင်.မရပဲ ပါတီကိုသာရွေးချယ်ခွင်.ရတော.မည် ။တစ်ဖန်ပါတီကမှ မဲအချိုးအစားရရှိမှုကိုမူတည်၍ လွှတ်တော်တက်မည်.ကိုယ်စားလှယ်ရွေးပေးရမည်ဖြစ်ရာ လူတော်များကိုတိုက်ရိုက်ရွေးခွင်.နည်းသွားမည်ဖြစ်သည် ။ ကိုယ်.မဲဆန္ဒနယ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်.အမတ်ကဘယ်သူမှန်းပင်မသိရသဖြင်.တာဝန်ခံမှု တာဝန်ယူမှု နည်းသွားမည်းစနစ် ၊ မည်သူ.အဖေခေါ်ရမှန်းမသိသည်.စနစ်ဖြစ်ပေလိမ်.မည် ။ နဂိုကတည်းကမှလွှတ်တော်တွင်တပ်မတော်မှ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနေရာယူထားပြီးဖြစ်ရာ ကျန်သော ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအတွက်သာပြုလုပ်မည်..ရွေးကောက်ပွဲတွင် ထပ်မံ၍ ရာခိုင်နှုန်းစနစ်ဖြင်.ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနေဦးမည်ဆိုပါက အားကောင်းသောအစိုးရတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်မလာတော.ပဲ ညွန်.ပေါင်းအစိုးရဖြစ်ပေါ်လာပေမည် ။ထိုအခါ အစိုး၇အဖွဲ.ထဲတွင် တစ်ဖွဲ.ကိုတစ်ဖွဲ.ကန်.လန်.တိုက်နေကြတာနှင်. နောက်ထပ် (၅ ) နှစ် တိုင်းပြည်မှာရေစုန်မျောပေဦးမည် ။
အံ.သြစရာကောင်းသည်မှာ အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် PR စနစ်ကိုကျင်.သုံးရေးအဆို ကို NDF ပါတီမှဒေါ်ခင်ဝိုင်းကြည်ကစတင်အဆိုတင်သွင်းစဉ်က တိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ.ချုပ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင်းအတူ ၊ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အားလုံး က တညီတညွတ်တည်းကန်.ကွက်မဲပေးခဲ.ကြသည် ကိုတွေ.ခဲ.ရသည် ။ PR ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုထောက်ခံသူမှာ ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီဝင်များးနှင်. N.D.F ပါတီဝင်များ သာ ရှိခဲ.သည် ။သို.သော်ထိုအဆိုကိုပင်ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ.တွင်ကျင်းပသောပြည်သူ.လွှတ်တော် တွင်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ၌ တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ဆန္ဒမဲခွဲစဉ်တုန်းကလို ဆန်.ကျင်ကန်.ကွက်မှုမပြုတော. ထောက်ခံမဲပေးခဲ.ကြသည် ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များက ကန်.ကွက်မဲပေးခဲ.ကြသည် ။ ကန်.ကွက်မဲ ၄၂ မဲရှိပြီး တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ် (၂၀) ဦးခန်.က PR အဆိုကိုကန်.ကွက်သောအားဖြင်. ထိုနေ.တွင်လွှတ်တော်သို.မလာရောက်ကြောင်းပြောကြားခဲ.ကြသည် ။ ဤနေရာ၌ သဘောထားပြောင်းသွားသောတပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ၏ရပ်တည်မှုမှာ အံ.အားသင်.ဖွယ်ဖြစ်သည် ။ အမျိုးသားလွှတ်တော်မှတပ်မတော်သားများက PR ကိုဆန်.ကျင်သည် ။ ရက်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ ပြည်သူ.လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားများက PR ကိုထောက်ခံသည် ။ အဘယ်ကြောင်.သူတို.ဘက်ပြောင်းသွားသနည်း ။ တစ်ခုပဲရှိသည် ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီခေါင်းဆောင်များနှင်.တပ်မတော်ကာချုပ်တို.လူမသိသူမသိ တွေ.ဆုံညှိနှိုင်းမှုတစ်ခုလုပ်လိုက်သည်.သဘောဖြစ်သည် ။ PR စနစ်ကြောင်.မဲများပြန်.ကျဲသွားလျင် တပ်မတော်မှရွေးချယ်လိုက်သော သမ္မတလောင်းသည် သမ္မတဖြစ်ဖို.လမ်းစများသည်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ကတပ်မတော်၏ထောက်ခံချက်ကိုရရှိနိုင်ဖို. မက်လုံးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပေသည် ။ ထိုအကြောင်းကြောင်.ပင်တပ်မတော်သည်စိတ်ပြောင်းကာ PR စနစ်ကျင်.သုံးမည်.အဆိုကို ကန်.ကွက်မှုရုပ်သိမ်းခဲ.ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပေသည် ။ တပ်မတော်သည် အရပ်သားသမ္မ၏သြဇာကိုနာခံလိုပုံမပေါ်ပေ ။၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ လုပ်ပိုင်ခွင်.လွန်လွန်ကျူးကျူးရထားသောကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းမှသမ္မတဖြစ်လာသူ ဦးသိန်စိန်အမိန်.ကိုပင် နာခံသူမဟုတ်ဟု အချို.ကသုံးသပ်နေကြရာ အရပ်သားတစ်ယောက်သမ္မဖြစ်လာမည်ကိုလိုလားမည်မဟုတ်ချေ ။ ထို.ကြောင်.ပင် ကြံခိုင်ရေးနှင်.တပ်မတော် ပုလင်းတူဗူးဆို.ပေါင်းစည်းကာ ပီအာစနစ် တွင်ထောက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပေသည် ။တနည်းအားဖြင်. အရပ်သားအစိုးရတက်လာနိုင်မည်.လမ်းကြောင်းကို ပူးပေါင်းပိတ်ဆို.လိုက်ခြင်းဟုဆိုလျင် ဆိုနိုင်ပါ၏ ။ မြန်မာ.နိုင်ငံရေးတွင် အရပ်သားများကိုအလှည်.မပေးပဲ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ ၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်လက်ရှိများသာ ကြီးစိုုးလွှမ်းမိုးထားရေးမူဝါဒ ၊ တနည်းပြောရလျင် လူမပြောင်း မူမပြောင်း ရှေ.သို.ချီမည်.လမ်းကြောင်းကိုချပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည် ။
တိုင်းပြည်အနာဂါတ်အတွက်လူရွေးသောအခါ အကြိမ်ကြိမ်လူကြိုက်နည်းခဲ.သောအဖွဲ.ကိုတော.အစားထိုးပြောင်းလဲမှကောင်းပေလိမ်.မည် ။ သို.သော်လည်းထိုသို.ပြောင်းလဲမှုသည် နိုင်ငံတော်နှင်.ပြည်သူလူထုအတွက်ဦးတည်ကာပြောင်းလဲမည်လား ၊ကျွန်တော်တို.မြို.မှ ကိုမှုန်ကြီးဘော်လီဘောအသင်းလူရွေးသလို ” ဒီနှစ်တော.ငါရယ်…. “ ဆိုသော ငါမပါဘယ်အခါမှမပြီး စစ်ဝါဒပဲခေါင်းထောင်လာဦးမှာလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါကြောင်း ။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြိး၊ပြည်ခရိုင်၊သဲကုန်းမြို့နယ်၊အောင်ကုန်းကျေးရွာရှိ သိမ်းယူထားသောလယ်မြေများ ပေါ်တွင် ယခုလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသော သမ(၃)၀န်ထမ်းများနှင့်ဒေသခံများ ထိပ်တိုက်တိုးသည့်ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပေါ်မည်ကိုစိုးရိမ်သည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် သဲကုန်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ၂၂-၇-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နေ့စွဲဖြင့် ပုဒ်မ ၁၄၅ အမိန့်စာ ကိုထုတ်ပြန်ပြီး ၄င်းနယ်မြေပေါ်သို့ သဲကုန်းမြို့မှရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအား လုံခြုံရေး ချထားသဖြင့် ဒေသခံများ ဖါးရှာငါးရှာရန်အတွက် အခက်အခဲကြုံနေရ၍ အဆိုပါပုဒ်မ ၁၄၅အား ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းပေးရန် ဒေသခံတောင်သူများနှင့်ဗကသ ကျောင်းသားများက ၂၆-၇-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ လုံခြုံရေးယူစခန်းချရာနေရာသို့သွားရောက် တောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
အဆိုပါကျေးရွာတွင် လယ်ယာမြေပြဿနာနှင့်ပါတ်သက်၍ သပိတ်စခန်းဖွင့်လှစ်၍ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခြင်း လမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်တောင်းဆိုခြင်းများ၊ထွန်တုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲ၍တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းများကြောင့် ပုဒ်မ၅၀၅(ခ)များ၊ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနှင့်တရားဆွဲဆိုခြင်း၊ပုဒ်မ(၁၈)ဖြင့်တရားဆွဲဆိုခံထား ရခြင်းများလည်းရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဲကျွန်တော်တို့ လက်ရှိဒီဒေသမှာ ပုဒ်မ၁၄၅ ကိုသူတို့တွေကထုတ်ထားတယ်ပေါ့။ဒီဒေသက လူတွေက ဆိုးသွမ်းနေတဲ့လူတွေလည်း မဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေနဲ့ကလည်း ရွာသားတွေနဲ့က ဘာပြဿနာမှ ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က ဒီပုဒ်မ ၁၄၅ ကိုရုတ်သိမ်းပေးပါလို့ တောင်းဆိုရတာပါ။အခုလက်ရှိမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာသားတွေ ရှာဖွေစားသောက်နေရတဲ့ ဖားရှာ၊ကြွက်ထိုး ငါးရှဉ့်ဖမ်း စတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်တဲ့အခါမှာ ဒီနေရာတွေကိုပဲဖြတ်သွားရတာ။အခုတော့ ဒီနေရာကို ကျူးကျော်ရင် ပိုင်နကကျူးလွန်မှုတွေနဲ့ တရားဆွဲမယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကြောက်လန့်ပြီး မသွားရဲမလာရဲနဲ့ အခက်တွေ့နေရတာပေါ့။ဲဟုဒေသခံ ဦးမြင့်အောင်မှပြောသည်။
ကျွန်တော်တို့လာရတဲ့အကြောင်းကတော့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုဒ်မ၁၄၅ ဟာ ဒေသတွင်းမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ် ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေကျမှထုတ်ပြန်ရတာပါ။အခုဒီမှာက ဒေသတွင်း မတည်ငြိမ်မှုတွေလည်းမဖြစ်ဘူး။ ဒေသတွင်းမှာလည်းဆိုးဆိုးရွားရွားဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။အဲဒါကြောင့် ဒီပုဒ်မထုတ်ပြန်တာ လုံးဝမတရားဘူးလို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြင်တယ်။အဲဒါကြောင့် လာပြီးတော့အတိအလင်းကန့်ကွက်တာပါ။ ဟု ဗကသကျောင်းသား
အဲဒီ ပုဒ်မ၁၄၅ ဟာ တရားသူကြီးကသာ ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်။အခုက မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ထုတ်တာဆိုတော့ မှားနေတယ်။တရားမ၀င်ဘူး ဟုဖမ်းဆီးခံထားရသော အောင်ကုန်းလယ်သမားများ
ဘက်မှရှေ့နေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသူ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးမြင့်အေးမှဆိုသည်။
ချောင်းရေတက်ပြီးရေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသဖြင့် လယ်ဧက ၆၀ ကျော်ရေနစ်ပျက်စီး
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပဲခူးတိုင်းသေကြီး၊ပြည်ခရိုင်ရှိဒေသတော်တော်များများမှာ မိုးများအဆက်မပြတ် ရွာသွန်းနေမှုများကြောင့် ချောင်းရေလျှံမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဇူလိုင်လ(၂၂)ရက်နေ့ညပိုင်းက ရွာသွန်းသောမိုး ကြောင့် ပြည်ခရိုင်၊သဲကုန်းမြို့အနီးရှိ သဲကုန်းကြိးချောင်းမှာ ရေများလျှံတက်လာပြီး အမျိုးသားတစ်ဦး မျောပါသေဆုံးခြင်း၊ဇူလိုင်လ(၂၃)ရက်နေ့တွင် ပြည်-သဲကုန်းကားလမ်းပေါ်ရှိတံတား(၂)စင်းမှာ ကျိုးပျက်ခဲ့ခြင်းများ အပြင် အဆိုပါ လျှံတက်လာသော ချောင်းရေများမှာ ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး လယ်ကွက်များအတွင်းသို့ ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုကြောင့် လယ်ဧက(၆၀)ကျော်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပျက်စီးသွားသောတံတားများမှာ ယခင်ရေလမ်းကြောင်းဟောင်းအပြင် ပိုမိုရေစီးစေရန်အတွက် တံတားဘေးဖက်(၂)ဖက်တွင် ရေထွက်လမ်း(၂)ခုကို လမ်းတံတားဌာနမှ ပြုလုပ်လိုက်သည့်အတွက် ချောင်းရေ လမ်းကြောင်းမှာ ယခုကဲ့သို့ပြောင်းလဲသွားရကြောင်း ယခုရေကြီးနစ်မြုပ်မှုမှာ ဇူလိုင်လအတွင်း ဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးမှုဖြစ်ပြီး အမြန်ဖြေရှင်းပေးရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြထားသော်လည်း လာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းနှင့် ယခုရေကိုပြန်ကျရန်တစ်ပါတ်ခန့်စောင့် ရမည် ဖြစ်ပြီး မိုးဆက်လက်ရွာသွန်းနေပါက ပြန်လည်စိုက်ပျိုး၇န်မဖြစ်နှိုင်သေးကြောင်းဒေသခံလယ်သမားများမှ ပြောသည်။
“အဲဒီရေလမ်းဖေါက်တုန်းက လယ်တွေထဲကိုရေ၀င်နှိုင်တယ်လို့ လယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဘာမှမဖြစ်နှိုင်ပါဘူးဆိုပြီးလုပ်သွားတာ။အခုတော့လယ်တွေလည်းပျက်စိးကုန်ပြီ။ပြန်စိုက်ရင်လည်း အရင်လိုဖြစ် မှာစိုးရတယ်။အခုတော့ပျိုးထောင်ထားတဲ့ပျိုးပင်တွေလည်း အကုန်ရေထဲပါသွားပြီ။လယ်သမားတွေ နှစ်ခါစိုက်ဖြစ်ကုန်ပြီ။ချောင်းက နဂိုနေရာဟောင်းကပျောက်သွားပြီး လယ်တွေထဲကနေစီးနေတယ်။ ချောင်းအဟောင်းကို ပြန်မတူးရင်တော့ လယ်တွေပျောက်သွားနိုင်တယ်။”ဟုရွာထောင်ကုန်းကျေးရွာမှ လယ်ဧက ၄ ဧကနစ်မြုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူ ဦးတင်ဆွေကပြောသည်။
တောင်ပြုံးပွဲတော်နှင့် မန္တလေး၊ ပြင်ဦးလွင်၊ စစ်ကိုင်း၊ ကံတလူ၊ မုံရွာ၊ ပုဂံ၊ ပုပ္ပါး၊ မကွေး ဘုရားဖူးခရီးစဉ် ( ၅ ညအိပ် ၆ ရက်ခရီး )
တောင်ပြုံးပွဲတော်နှင့် ဘုရားဖူးခရီး ၅ ညအိပ် ၆ ရက် ခရီးစဉ်ကို ၄.၈.၂၀၁၄၊ တနင်္လာနေ့၊ နံနက် ပြည်မြို့မှ စတင်ထွက်မည်ဖြစ်ပြီး ၁၀.၈.၂၀၁၄ စနေနေ့ နံနက်တွင် ပြည်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၅.၈.၂၀၁၄ အင်္ဂါနေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ (ဘုရားများနှင့် အပန်းဖြေနေရာ)၊ ၆.၈.၂၀၁၄ ဗုဒဟူးနေ့တွင် တောင်ပြုံးပွဲတော် (ကိုယ်တော်ကြီး၊ ကိုယ်တော်လေး ချိုးရေတော်ဆင်းသည့် နေ့ရက်)၊ ၇.၈.၂၀၁၄ တွင် စစ်ကိုင်း၊ ကံတလူ၊ မုံရွာ (ဘုရားများ)၊ ၈.၈.၂၀၁၄ ကြာသာပတေးနေ့တွင် ပုဂံ (ဘုရားများ)၊ ၉.၈.၂၀၁၄ သောကြာနေ့တွင် ပုပ္ပါး၊ မကွေး (ဘုရားများ)၊ ၁၀.၈.၂၀၁၄ စနေနေ့ နံနက်တွင် ပြည်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဘုရားဖူးခရီးစဉ်ကို အိမ်စီး Light Truck (လိုင်းကားမဟုတ်ပါ) ဖြင့်၊ တစ်စီးလျှင် အများဆုံး ၁၅ ယောက်သာ တင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးလျှင် ၃၅၀၀၀ိ/ နှုန်းဖြင့် တောင်ပြုံးပွဲတော်နှင့် ဘုရားဖူးခရီး ၅ ညအိပ် ၆ ရက်ခရီးကို ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိပ် သိရှိလိုပါက - ၀၉ ၄၃၀၈၄၅၅၉၊ ၀၉ ၄၃၀၄၇၈၆၂ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်း စာရင်းပေးနိုင်ပါပြီ။
အများပြည်သူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော ဓါတ်တိုင်အား အစားထိုးလဲပေးပါရန် ပြည့်သဲမောင်(ပြည်)
အများပြည်သူ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သော ဓါတ်တိုင်အား
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်ခရိုင် ၊ ပြည်မြို့လမ်းဘေးဝဲယာရှိ အချို့ဓါတ်
တိုင်တော်တော်များ များ၏အောက်ခြေများ သံချေးစားပြီး ပျက်လုနီးနီး
ရှိနေသည်ကိုလည်း တိုင်းလျှပ်စစ်ရုံး ၊မြို့နယ်လျှပ်စစ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့်အများပြည်သူများအသိပင်ဖြစ်ပါသည်။
ထိုလမ်းဘေးဓါတ်တိုင်များသည် နှစ်ရှည်လများ မိုးဒဏ်လေဒဏ်ခံရ
မကြာသေးခင်ရက်ပိုင်းက တာဝန်သိတာဝန်ရှိ အများပြည်သူများက
အသိပေးခဲ့သဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်း ရွှေဆံတော်ဘုရားဆိုင်ခန်းဆံသရှေ့
ဓါတ်တိုင် အဆက်နေရာအက်ကွဲ၍ လမ်းဘက်သို့စောင်းနေပြီး မိုးရွှာလျှင်ဓါတ်တိုင်မှဓါတ်လိုက်နေကြောင်း အကြောင်းကြား
ယခုအခါထိုဓါတ်တိုင်ကဲ့သို့ပင် ရွှေတစ်ချောင်းလမ်းနှင့်အုန်းတောလမ်းထောင့် တက္ကသိုလ်ရှေ့တိုးပြည်သျှံ စတိုးဆိုင်ရှေ့ (ဖော်ပြပါ ပုံပါ) ဓါတ်တိုင်သည် အောက်ခြေ
တွင် သံချေးများစားကာ လေတိုက်ခတ်ပြီးမိုးရွှာသွန်းချိန်တွင် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ
ဓါတ်တိုင်ပြောင်းလဲအစားထိုးပေးပါရန် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့်အများပြည်သူများ
ကိုယ်စားအပြုသဘောဆောင်၍ အ ကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဝါးလုံးနဲ့သိမ်းရိုက်​ ငပြူးက ငပြဲပြန်​​ချောက်​
မကုန်​​သေးတဲ့ အာဏာရှင်​စနစ်​ ​နောက်​ဆုံး
​တွေးကြည့်​ ​ပြေးကြည့်​စရာမလို မီဒီယာအပို​တွေ​ကြောင့်​ က​လောင်​ထက်​ကဓားသွား
​ကျောက်​ပြား​ပေါ်အပွတ်​ခံရ သပွတ်​သီးလိုဖြစ်​​နေတယ်​ အူလည်​လည်​မိန့်​ခွန်း​ပြောစကား ကြားရတာ နားဝမှာလာညိ​နေတယ်​ ဆရာကြီး​လေသံ​တွေနဲ့ အ​ဖြေမှန်​လည်းမ​ပေးခဲ့ဘူး အ​ခြေအ​နေမထူးပြီမို့ ​လေ​ပွေရူး​တွေတိုက်​​နေပြီ ​ပြောင်​​ပြောင်​ ​ပြောရရင်​
​မောင်​​မောင်​​ဒေါပွလာပြီမို့ ​သောက​တွေရင်​မှာပိုက်​​ထွေး ပြည်​သူသာ မကြည်​ဖြူရင်​ ဒီလူဗိုက်​ပြည့်​မှာမဟုတ်​ဘူး....
မရှိခဏ ဆရာတော် မွေးဖွားရာ
သီတဂူ နဲ့ မရှိခဏ ဆရာတော်ကြီးတွေ ​တွေ့
တင့်တယ်လှတဲ့ပန်းချီကားတစ်ချပ်သဖွယ့့် 
ဒီနေ့တော့ စီမံညံ့ဖျင်းတဲ့ သူတွေအောက်မှာ
ချောင်းတွေပျက် ရတယ် တံတားတွေကျိူးလို့
လှည့်ပြန်ခဲ့ရတယ် လယ်ယာမြေ တွေ
ရေလွှမ်းလို့ သဲတွေဖုန်း ပျက်သုန်းလို့မရွှင်ပြ
ရွာပိုင် အင်းက ခရိုနီအင်းဖြစ် မကြေနပ်လို့
အော်ဟစ်ပြ ပြည်သူကိုမ စောင့်ရှောက်
ခရိုနီဘက် သနတ်​ဖောက်ပြတဲ့ ပြည်သူ့ရဲ
ရဲရဲကြီးပြောလိုက်မယ် ဂုဏ်မတက် အယုံခက်တဲ့ ပြည်သှူုရဲ
ရွှေသဲမြေရဲ့ အလှပန်းချီ စနစ်ဆိုးရဲ့လက်အောက်မှာ
အမဲရောင် ပန်းချီကားကြီး ဖြစ်ခဲ့ရပြီ ခရိုနီကြီးတို့ရယ့့် 
( မရှိခဏ ပြည်)
ငွေတိုးချေးမှု တရားရုံးရောက်တော့ ဘာဖြစ်သွားသလဲ (ပန်းတောင်း)
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ဆိုတဲ့ MPT ကို လူအများ ကျိန်ဆဲနေတာ ကြာပေါ့ဗျာ။ အဝိုင်း လည်နေတာနဲ့ပဲ ဖုန်းဘေလ်ကုန်လို့ ဆိုတာကိုး။ အရင်ကတော့ ကျွန်တော့်စာတွေကို ပုံနဲ့တွဲသုံးသဗျ။ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော့်မြန်မာပြည်က မိတ်ဆွေ စာဖတ်ပရိသတ်ကို အားနာလာတော့ များသောအားဖြင့် ပုံသိပ်မထည့်ဘဲ စာတွေရေးပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း စက်တင်ဘာလမှာ တယ်လီနောက ဖုန်းကတ်တွေ ရောင်းပေးမယ်ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံက မိတ်ဆွေများ ပျော်ကြလေသည်ပေါ့။ သို့ပေမယ့် အလေးထား ဂရုစိုက်ရမယ့် အချက်တွေ အများကြီး ရှိနေပါလျက်နဲ့ ကုလားပိုင်လို့၊ တရုတ်ပိုင်လို့ မသုံးဘူး အော်နေကြတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ အထူးအလေးထားသင့်တဲ့ အချက်တွေကို သတိမပြုကြလေတော့ သတိပေးချင်တာလေး တွေကို ရေးသားတင်ဆက် လိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
နောက်ပိုင်းမှ တိုင်တဲ့သူတွေများလာတော့ ထိုင်းအစိုးရ NBTC ကော်မရှင်က အဲလိုနည်းနဲ့လုပ်လို့ ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေဆီက အလကားရလိုက်တဲ့ငွေဟာ တစ်နှစ်တစ်နှစ် ဘတ်သန်းရာကျော်ရှိလို့ အဲဒီလို မလုပ်ရဘူးလို့ တားမြစ်လိုက်တာ သိပ်မကြာလှသေးပါဘူး။ ဒီနည်းဟာ ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေကို တန်ရာတန်ကြေး ဝန်ဆောင်မှု မပေးလိုက်ဘဲ မတရား အမြတ်ရသွားတဲ့ နည်းတွေထဲက တစ်နည်းပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော...။ လာတော့မယ့် အော်ရီဒူးတို့၊ တယ်လီနောတို့ရော ဒီလိုအချိုးမျိုးလာမှာ လား......။ ဒါ့အပြင် ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ တွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ရောင်းစားတဲ့သကာလ မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းထဲမှာ တစ်နာရီကို နှစ်ခါသုံးခါလောက် ကြော်ငြာမက်ဆေ့ခ်ျတွေ ဝင်လာပါတော့မယ်။
ဒါတွေကို သုံးစွဲသူဘက်က ရပ်တည်ပြီး သမာသမတ်ကျကျ တိုင်တောလာရင် ရပ်တည်ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကော်မရှင်တစ်ရပ်ဟာ မဖြစ်မနေ အရင်ဖွဲ့စည်းထားရမှာပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်က ထိုင်းလယ်သူမကြီး တစ်ယောက်ရဲ့ သား၊ အမေ့ဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ဂိမ်းက စိန်ရမှတ်တွေကို ဘုမသိဘမသိ ဝယ်ဆော့နေတာ လကုန်ငွေရှင်းဖို့ တောင်းခံစာလာတော့ ဘတ် ၂ သိန်းကျော် (မြန်မာငွေ သိန်း ၆၀ ကျော်) တောင်းလာပါတယ်။ ဖုန်းကုမ္ပဏီရုံးခွဲကို သွားပြောတော့ သုံးပြီးဖြစ်နေလို့ မတတ်နိုင်ဘူး။ ပေးရမှာပဲလို့ ဆိုပါသတဲ့။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို စာနယ်ဇင်းတွေကတစ်ဆင့် ထိုင်းအစိုးရ NBTC ကော်မရှင်က သိသွားတော့ ကော်မရှင်အတွင်းရေးမှူးချုပ် တာကွန်တန်တာစစ်က ကုမ္ပဏီကို ခေါ်ပြောတော့မှ လယ်သူမ သားအမိ ဘုမသိဘမသိ လုပ်မိတဲ့အတွက် အဲဒီငွေတွေ မပေးပါနဲ့။ လျှော်ပစ်ပါတယ်လို့ အကြောင်းပြန်လာပါတယ်။ ဒီလိုနောက် ထပ်မဖြစ်အောင် ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေကို အမြင့်ဆုံးဖုန်းကနေ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏကို သတ်မှတ်ပေးဖို့ အမိန့်ထုတ်ပါတယ်။ အစိုးရကော်မရှင် ကနေ ပြည်သူတွေ မနစ်နာရအောင် ကြားဝင်ရပ်တည်ပေးတာပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီလုပ်ငန်းကြီးတွေက လုပ်လာမယ့် ဒီလိုအချိုးမျိုး လူလည်ကျမှုတွေကို စနစ်တကျ ထိန်းချုပ်ပြီး တိုင်တောလို့ရမယ့် အစိုးရ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ကြပ်မတ်ပြီး သုံးစွဲသူတွေဘက်က ရပ်တည်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးပြီးကြပြီလား။ ဖြစ်လာမှာနော်..။ နိုင်ငံခြားက လာတည်ထောင်လို့ သူတို့လက်သိပ်ထိုးတဲ့ ဂေါက်ဆက်ကလေးနဲ့ ဂေါက်သီးရိုက်လိုက် ဂျော်နီဝါးကား ဒဗယ်ဘလက်လေးနဲ့ နေနေရင်တော့ ဖုန်းသုံးမယ့်သူတွေကို သနားလှပါသဗျာ။ ဖုန်းသုံးသူတွေ ... ထူးမခြားနားသီချင်းဆိုပြီး ငိုချင်းသာ ချနေပါတော့။ ကဲ... နောက် အကြောင်းဆက်ရေးမယ်ဗျာ။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ Postpaid အကြောင်းဗျ။ နိုင်ငံတကာကနေပြီး ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုခုကို တခြားတစ်နိုင်ငံမှာ ဝန်ဆောင်မှု လာပေးလာဟာ အဲဒီနိုင်ငံသားတွေ အတွက် ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး အကျိုးအမြတ်ကို ရယူတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ အခြေတကျ ဖြစ်တာနဲ့ နိုင်ငံသားတွေအတွက် Postpaid စနစ်ကို အမြန်ဆုံး ပူးတွဲ အကောင်အထည် ဖော်ကြပါတော့တယ်။ သုံးစွဲသူတွေကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ မက်လုံးပေးကြတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော် အသုံးပြုတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းဆိုရင် 3G အင်တာနက်ကို ကြိုက်သလောက်သုံး၊ ပြီးရင်ဖုန်းက ပြည်တွင်းမှာကြိုက်တဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်ကို မိနစ် ၅၀၀ အခမဲ့ခေါ်၊ ပြည်တွင်း ကြိုက်တဲ့နံပါတ်ကို မက်ဆေ့ခ်ျ အစောင် ၅၀၀ အထိ အခမဲ့ပို့ စတဲ့အတွဲကို ယူထားတာ တစ်လကို ၅၉၉ ဘတ်ပေးရပါတယ်။ ပိုသုံးရင် ပိုတာထပ်ပေး၊ ပြည်ပခေါ်တာ သတ်သတ်ပေးပေါ့ဗျာ။ အင်တာနက်လည်း သုံးချင်သုံး မသုံးချင်နေပါ။ အဲဒီတော့ အခြေခံအားဖြင့် တစ်လ ၅၉၉ ဘတ်ကတော့ ပေးနေပေါ့ဗျာ။
ဒါက သူတို့ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ဥပမာပါ။ အများကြီး ရှိပါတယ်။ တစ်လ ဘတ် ၁၀၀ တန်၊ ၂၀၀ တန်၊ ၃၀၀ တန် ဝန်ဆောင်မှုတွေကနေ ဘတ် ၁၅၀၀ ကျော် ဝန်ဆောင်မှုတွေအထိ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်ရွေးယူပြီး လူတန်းစား အသီးသီးအတွက် ဘယ်ဘက်ကမှ လွတ်မသွားရအောင် ဈေးကွက်ရှာကြတာပါ။ ခက်တာက အဲဒီလိုင်းတွေကို ကိုယ်ကနှစ်သက်လို့ တစ်ခုခုရွေးပြီး ဝယ်လိုက်မိရင် အတိုင်းအတာတစ်ရပ် အထိပဲ 3G 4G စသဖြင့် သုံးလို့ရပါတယ်။ သူတို့သတ်မှတ်တဲ့ မီဂါဘိုက် ဂစ်ဂါဘိုက် အရေအတွက်ပြည့်တာနဲ့ အဲဒီ 3G 4G Speed တွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး GPRS 2G အဆင့်ကို ပြောင်းချလိုက်တော့တာပါပဲ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ဖုန်းကနေတစ်ဆင့် အပိုထပ်ဝယ်ချင်ရင် ဘယ်နံပါတ်ကို နှိပ်ပါဆိုပြီး မက်ဆေ့ခ်ျတွေ အဆက်မပြတ် ပို့ပါတော့တယ်။
အဲဒီသုံးစွဲမှုစနစ်တွေ အနေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကရော သတ်မှတ် ထားပေးပါပြီလား။ အဲလို သတ်မှတ်ပေးခြင်း မရှိလို့ကတော့ မြန်မာပြည်က သုံးစွဲသူတွေ နစ်နာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ပြတာ အများစုဟာ မြန်မာပြည်က စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ တွေ့ကြုံဖူးခြင်း မရှိသေးတဲ့အတွက် အထူးအဆန်းလို ဖြစ်နေဖို့ များပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အင်တာနက် ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ မစားရ ဝခမန်း ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးပဲ ရမလို၊ မြန်မာပြည် နေရာအနှံ့ပဲ ရမလိုနဲ့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ထိုင်းလို မိုဘိုင်းလ် အင်တာနက် အသားကျပြီးနေတဲ့ နိုင်ငံမှာတောင် ဘန်ကောက်မြို့ တချို့နေရာတွေမှာ လိုင်းမမိတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီကနေ လိုင်းတစ်ခု ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် မိမိနေတဲ့ အရပ်ဒေသမှာ လိုင်းမိ မမိ လွှင့်အား ဘယ်လောက်ရတတ်လဲ မေးကြည့်ရပါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဈေးကွက်မျှတဲ့ အနေနဲ့ တယ်လီနော လိုင်းမိတဲ့နေရာမှာ အော်ရီဒူးမမိ၊ အော်ရီဒူးမိတဲ့ နေရာမှာ တယ်လီနောမမိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတာထက် ဖြစ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တင်ပြချင်တဲ့ အကြောင်းအရာက Roaming လို့ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို တခြားနိုင်ငံမှာ သယ်သွားချင် ကြတဲ့သူတွေအတွက် ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေက ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုပါ။ ဒီဝန်ဆောင်မှုကို တော့ မိမိဖုန်းနံပါတ်ကနေ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ တကယ့်ကို ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်က အရေးပါတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိနေသူတွေ သုံးကြတာပါ။ သာမန်လူတွေကတော့ မသုံးသင့်လှပါဘူး။
Postpaid ဖုန်းရဲ့ ဆင်းမ်ကတ်တစ်ခု ဝယ်ရင် မှတ်ပုံတင်ပြပြီးမှ ကျား၊ မ နေရပ်လိပ်စာ ဖြည့်စွက်ပြီး ဝယ်ရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့က ကျွန်တော်သိသလောက် တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း လုပ်ရပါတယ်။ ဆင်းမ်ကတ်ကို ဖုန်းအနေနဲ့ သက်သက်အသုံးပြုရင် သိပ်အကြောင်း မဟုတ်ပေမယ့် အင်တာနက်လိုင်းဖွင့်ဖို့ လျှောက်တော့မယ် ဆိုရင်တော့ အော်ရီဒူးမှ ကွက်တောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တယ်လီနောရော၊ ထရူးရော အကုန်တောင်းကြရပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်နေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုကြောင့် အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ကာကွယ်ရာမှာ အများကြီး အထောက်အကူပြုပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တွင်ကျယ်လာမယ့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသုံး ဘဏ်စနစ်တွေ၊ ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေမှာ အများကြီး အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ဘယ်လုပ်ငန်းကြီးလာလာ ဒီအချက်ကတော့ အခုမဟုတ်တောင် နောက်က လိုက်လုပ်ကြမှာပါ။
ဒီတော့ မရောင်ရာဆီလူး အစိုးရိမ်ပိုပြီး အဆုံးစွန်တွေ ကြိုတွေးမပူသင့်ပါဘူး။ ဒီစနစ်တွေအားလုံးရဲ့ အဓိက လိုအပ်ချက်ဟာ ကျွန်တော် အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဖုန်း၊ အင်တာနက် သုံးစွဲသူနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မယ့် ကုမ္ပဏီကြီးတွေကြားမှာ စံနှုန်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းစနစ် ချမှတ်ပေးမယ့်အပြင် အထက်က ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေလို ဖြစ်လာရင် ညှိနှိုင်းပေးနိုင်မယ့်၊ ဖြေရှင်းပေးရမယ့် သြဇာအာဏာရှိတဲ့ အမှုဆောင် ကော်မရှင်တစ်ရပ်က လိုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီဖွင့်ဟ... လုပ်ကြဟ... ငါတို့ကို နှစ်စဉ်ကြေးသွင်း၊ အခွန်အကောက်သွင်း၊ ကျန်တာ...မင်းတို့ အဆင်ပြေသလို စိတ်ကြိုက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ချမှတ်ကြ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းသုံးသူတွေနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကြားမှာ ကုမ္ပဏီတွေက သူတို့ကြိုက်သလို မိုဘိုင်းလ် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု စာချုပ်တွေကို ရေးချင်သလို အသာစီး ရေးဆွဲသွားရင် မြန်မာပြည်သား ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေ နစ်နာမှာပါ။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆို ဖုန်းသုံးစွဲသူတွေ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို ရယူကြတော့မယ်ဆိုရင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုကြရတာ ထုံးစံပါ။ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ရတဲ့နည်းနဲ့ အမြတ်ထုတ်ကြမှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ပဲခူးတိုင်း သဲကုန်းမြို့အဝင်က သဲကုန်းကြီးချောင်းတလျှောက် ရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲကတော့... ချောင်းရေလျှံစဉ်အချိန် လူတဦး မျှောပါသေဆုံးခြင်း၊
ကျားပင်းမင်းလှကျေးရွာနဲ့ ရွာထောင်ကုန်းကျေးရွာက လယ်မြေဧက (၆၀) ကျော်နဲ့
စပါးပျိုးခင်းတွေ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။
လယ်ယာမြေပျက်စီးသွားတဲ့ ကျားပင်းမင်းလှကျေးရွာက လယ်သမား ဦးမြင့်မောင်က...
“ချောင်းက ရေလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး၊ ကျနော်တို့ လယ်တွေထဲ တာကျိုးပြီးဝင်လာတော့ စိုက်ခင်းတွေ အကုန်းပျက်ပြီဗျာ။
အခုချိန်အထိ ဘယ်တာဝန်ရှိလူကြီးကမှ လာမေးတာ မြန်းတာလည်း မလုပ်ဘူး၊
ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိတော့ပါဘူး”
အဲဒီနေ့က မိုးရွာသွန်းမှုများပြီး သဲကုန်းကြီးချောင်းတံတား ကျိုးခဲ့သလို၊
အသက် (၂၀) အရွယ် အမျိုးသား လူငယ်တဦး ချောင်းတွင်းမျောပါသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သဲကုန်းမြို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက ဧရာဝတီကိုပြောပါတယ်။
“အဲဒီနေ့က ချောင်းအထက်ဘက်ကရွာက ညီအကို နှစ်ယောက်ချောင်းဖြတ်ကူးတာ၊
အကိုဖြစ်သူက ညီကိုလှမ်းတားတာ မမှီတော့ပဲ ပုဆိုးပဲ လက်ထဲရလိုက်တယ်။
ချောင်းရေနဲ့ မျောပါပြီး၊ ကျိုးကျတဲ့ တံတားနားမှာ အလောင်းက လာပေါ်တယ်။
အသက် (၂၀) အရွယ် ကောင်းလေးတယောက်ပါ”
သဲကုန်းကြီးချောင်းတံတား ပြုပြင်မွန်းမံရာမှ တောင်းသူများမြေဖို့ထားတဲ့ တာရိုးဘောင်မှ မြေသားတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလက ဖယ်ရှားခံခဲ့ရလို့ အခုလို မိုးများ၊ ရေလျှံချိန်မှာ
တာရိုးဘောင်မှ ရေမထိန်းနိုင်တဲ့အတွက် ချောင်းရေစီးကြောင်းပြောင်းသွားတယ်၊ လယ်ယာမြေများ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးရတယ်လို့ ရွာထောင်ကုန်းကျေးရွာက လယ်သမားဦးမျိုးသန့်က ဧရာဝတီကိုပြောပါတယ်။
ဒီဖြစ်ရပ်အတွက် သူက အစိုးရရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးဌာနမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“မနှစ်က သီတင်းကျွတ်က သဲကုန်းမြို့နယ် ဆောက်လုပ်ရေးဌာနက ကျနော်တို့တာဘောင်မြေတွေကို လာဖဲ့တယ်။
ဒါကိုဖဲ့ရင် မိုးတွင်းဆိုရင် ရေတိုက်စားပြီး လယ်တွေပျက်စီးမယ်လို့ ကျနော်တို့ အတန်တန်ပြောတဲ့အထဲက လုပ်သွားတာ အခု သူတို့ဘာမှတာဝန်မယူဘူး၊
မဖြစ်ပါဘူး မဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီး အခုလိုဖြစ်တော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။
ဒုက္ခရောက်တာ ကျနော်တို့ လယ်သမားတွေပဲ”
ဒီအတောအတွင်း ပျက်နေတဲ့ တံတားကိုလာရောက်ပြင်ဆင်နေတာကတော့ သဲကုန်းမြို့နယ် ဆောက်လုပ်ရေးက တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာပါ။
တံတားကျိုးပြီး လယ်ယာမြေများပျက်စီးခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခဲ့ရာ ၎င်းက ဖြေဆိုရန် ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။
သဲကုန်းကြီးချောင်းမှာ ရေလမ်းကြောင်းပြောင်း စီးဆင်းနေသည့်အတွက် လယ်ဧက (၆၀) ကျော်မှာ သေမြေများဖုံးလွှမ်းပြီး စိုက်ပျိုးထားသည့် စပါးခင်းများနှင့် စပါးပျိုးခင်းတွေ ပျက်ခဲ့ရပြီး ရွာထောင်ကုန်းကျေးရွာက တောင်သူအများစု ဒုက္ခကြုံတွေ နေရကြောင်း သိရပါတယ်။
××××ဖုံးကွယ်ဖျောက်ဖျက်ထားခြင်းခံရသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့်ခွန်း ××××